Senior Member များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Senior Member များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
Senior Member များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
Posted by အာဖျံ ကွီး on Oct 22, 2010 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
Senior Member အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ အာဖျံကွီးရဲ. နံမယ်အရင်းက (…) ပါ။ GAZETTE က User Name ကတော့ အာဖျံကွီးပေါ့ဗျာ။ အဲ … အာဖျံကွီးဆိုလို. ယောင်္ကျားလေးလို. မထင်ကြပါနဲ.အုံး၊ မိန်းကလေးမှ မိန်းကလေး စစ်စစ်၊ အသက်ကတော့ ၂၂ နှစ်ပေါ့။ ဒါနဲ. Senior တို.ကိုမှာထားရအုံးမရ် … ငယ်တရ်ဆိုပီး ခေါင်းမခေါက်ရဘူး၊ ကြီးတရ်ဆိုပီးတော့လဲ နွဲ.ဆိုးမဆိုးရဘူးနော် …
အာဖျံကွီးက အခုမှ Member စ၀င်တရ်ဆိုပေမဲ့ GAZETTE ကိုရော GAZETTE က Senior တွေကိုရော ကောင်းကောင်းရင်းနှီးနေတာ ကြာပါပီ။ Member မ၀င်ထားလို. Comment မပေးတာကလွဲရင် အကုန်လုပ်တရ်ဗျ။ Post တွေကို ၀င်ဖတ်တာတို. Copy ကူးတာတို.ပေါ့ဗျာ (ခွင့်မတောင်းပဲ Copy လုပ်မိတာတော့ Sorry ပါနော်၊ နောက်ဆိုရင် ခွင့်တောင်းပြီးမှပဲ Copy လုပ်ပါ့မရ် … ဟာဟ) အဲဒါကြောင့်မို. ဘယ် Senior ကဘယ်လိုကဲတာ၊ ဘယ် Senior ကဖြင့်ဘယ်လို ဘရုတ်ကျတရ် ဆိုတာ အကုန်သိပီးသား (နံမယ်တွေတော့ မပြောတော့ဘူး၊ ခဲနဲ.ထုခံထိမှာစိုးလို. ဟာဟ) အာဖျံကွီးသူငယ်ချင်း ချာတူးလန် အမြဲပြောပြတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။ ကဲ … အခုတော့ ဒီလောက်ပဲဗျာ …
အာဖျံကွီး နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဒီ Site လေးကိုတော်တော် သဘောကျတရ်၊ Senior တွေတစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် ရှိကြတာကို ချစ်တရ်ဗျာ။ အဲ … အာဖျံကွီးကိုလည်း စလို.နောက်လို.ရပါတရ်နော်၊ စိတ်ဆိုးတတ်ဝူး … ဒေါသထွက်လာရင်သာ ကိုင်ပေါက်တတ်တာ … ဟာဟ (အလကားပြောတာပါ၊ အတည်ပြောတာပါ … ဟာဟ)။ ကဲ …အာဖျံကွီး ကတော့ မိတ်ဆက်ပီးပီဗျာ … Senior တို.ဘက်က ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ. Comment says Welcome လေးတော့လာပေးပါလို.။
* အဲ အာဖျံကွီးရေးထားတဲ့ Idiom ထဲက Balls, Ball သုံးတဲ့ Idioms Post လေးကိုလဲ ၀င်ရောက်လေ့လာ ဗဟုသုတ ယူကြပါအုံးနော် ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
အာဖျံကွီး က ပြောတော့မိန်းကလေးဆိုပြီး တဗျာဗျာနဲ့။
မန္တလေးသူလို့ပြောဦးမှာလား ။ စာရေးတာကိုကြီးပြီးယောကျာ်းလေးလားမိန်းကလေးလားအကဲခတ်လို့ရပါတယ် ။ အာဖျံကွီးရေးတဲ့ comment တွေမှာလည်း သိနိုင်တယ်လေ ။
ချာတူးလန်ရေ ကယ်ပါအုံး အိတုန်က အာဖျံကွီး ကို ယောင်္ကျားလေး ထင်နေပီ ထင်တရ် …
ယောကျာင်္း မိန်းမ တတ်နိုင်သလောက်ခွဲခြားလို့ရအောင် မိန်းကလေးများသာဖြေဆိုရန်ဆိုပြီး post လုပ်ပြီးပြီ ….စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တာလို့ပြောသားဘဲ။
အောင်မာ Fatty ဟင်းနော် ဟင်းနော် ဟင်းနော် …
ဖတ်ရပါတရ် အဲဒီ Fatty ရေးထားတဲ့ Post … အဲတုန်းက အာဖျံကွီး က Member မဖြစ်သေးလို. Comment မပေးခဲ့တာပါနော် (လျှို.၀ှက်ချက် တွေသိသွားမှာစိုးလို.လဲ ပါတာပေါ့နော် ပေါ့နော် ပေါ့နော် ဟာဟ)။ အိတုန်မတရား စွပ်စွဲတိုင်း လိုက်မနှိပ်ကွက်နဲ.နော် နဲ.နော် နဲ.နော်…
ဘယ်လိုအကဲဖြတ်လိုက်လဲ ကွီးကွီးကကျနော် မန္တလေးဂေဇက်ဖတ်ပီး
တချိန်လုံးရီနေလို့ သူပါမနေနိုင်ဖြစ်သွားတာ ဟားဟား
online မှာတော့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ခွဲခြားစရာလဲ သိတ်မလိုပါဘူးလို့ ထင်တာပါပဲဗျာ… မိန်းကလေးဆိုပြီး ဟန်ဆောင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရော၊ ယောက်ျားလေး ပုံ ဖမ်းထားတဲ့ မိန်းကလေး တွေရော အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ… Welcome ပါ အာဖျံကွီးရေ…
အာ … ဒုက္ခပါပဲ … ဂယ်ဂယ်မိန်းကလေးပါဆို … “ဗျာ” လို.ထည့်ရေးတာက … မန္တလေးသူမို.လို.လဲ မဟုတ်ဘူး … တမင်တကာ စတန်.ထွင်ထားတာဗျ … အာဖျံကွီး … အားကီး စိတ်ညစ်တရ်ဗျာ …
femal, 22 ..interested.. man ko lar yin see mal lay.. I hope u r strong enough..he he
lu ta lone says:
အဓိက ကတော့ အာဖျံကီွးလို့ ကလောင်ပေးထားရင် လိုက်ဖက်အောင် လုပ်နော်…
ဒေါသဖြစ်ရင် ကိုင်ပေါက်တတ်လည်း မကြောက်ပေါင်.. ဆူးကလည်း ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ လာထိုင်နေမှ မဟုတ်ဘဲ.. ဟီးဟီး..
ခင်မင်တတ်ပါတယ်။ ပေါဖော် ပေါဖက် တယောက်တိုးတယ် သဘောထားပါတယ်။
သိပ်ကြောက်သွားသလား မမြ၀င်း (အဲ … ဆူး)၊ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဘောင်းဘီချွတ်တာ ရေးချိုးမလို.ပါ (အဲ … ဆောရီး … ဒေါသဖြစ်ရင် ကိုင်ပေါက်တရ် ဆိုတာက ပုရွက်ဆိတ် ကလေးကိုပါ)
အာဖျံကွီးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိန်းကလေးတဲ့ ရေးတဲ့စာက
သိပြီ ယောက်သွားလေးပေါ့ ဟုတ်လား
all the same ဘဲလေ ၀ုတ်ဘူးလား
ballmly welcome par just kidding fri warmly welcome